Tamarta Qoraxda Sawirka - Cusbooneysiinta Cagaaran | Cusboonaysiinta Cagaaran (Bogga 2)
Isbadalka cajiibka ah ee Forestalia
Forestalia waxay mar kale xaraashay xaraashka cusboonaysiinta ay Dawladu fulisay bishii May ee la soo dhaafay, waxaa la siiyay 1.200 megawatts (MW) oo ka mid ah 3.000 ee la bixiyay.
Horumarinta tamarta la cusboonaysiin karo ee Isbaanishka
Laga soo bilaabo dhammaadkii 2011, tallaabooyin taxane ah oo sharci dejin ah ayaa la ansixiyay kuwaas oo si buuxda u saameeyay horumarinta tamarta la cusboonaysiin karo ee Spain.
Ilaha la cusboonaysiin karo waxay noqdaan kuwo moodada ka shaqeeya waddamo badan oo waaweyn
Shirkado aad iyo aad u tiro badan ayaa sharad ku bixinaya helitaanka tamarta ay uga baahan yihiin ilaha dib loo cusboonaysiin karo. Iberdrola waxay tamar siisaa Apple, Amazon, Nike iyo kuwa kale
Isbaanishku wuxuu diiday qoraxda: is-cunis iyo dhiirrigelin
Isbaanishku wuxuu diidan yahay isticmaalka Sun-ka iyo qoraxda, taasoo ka dhigaysa muwaadiniinta inay wax badan ka bixiyaan biilka korontada. Dowladdu sharad kuma gasho tamarta qorraxda.
Isbaanishku wuxuu uruursadaa ugu yaraan 27 cabashooyin ururada caalamiga ah sida ICSID. Sheegashooyinka guud ahaan waa 3.500m, in kastoo ay gaari karaan 6.000.
Forestalia waxay xaaqdaa xaraashka la cusboonaysiin karo
Awoodda dabayshu waxay xaaqday xaraashka, dhammaan guuleystayaasha waxay bixiyeen qiimo dhimis ugu badnaan. Enel (500MW) Gaaska Dabiiciga ah (650MW), Gamesa (206MW) iyo Forestalia (1200MW)
Si loo qiyaaso waxa ka soo baxa tamarta la cusboonaysiin karo, Wakaaladda Tamarta Caalamiga waxay fulisay isku dheelitirnaan sanadka 2016.
Isbaanishku wuxuu lumiyay heshiisiintii ugu horeysay ee caalami ah sababo la xiriira jarista dib u cusbooneysiinta
Isbaanishku wuxuu lumiyay kii ugu horreeyay ee dhexdhexaadinta caalamiga ah kahor ICSID, sababo laxariiraha la codsaday tan iyo 2010 si loogu caawiyo tamarta la cusboonaysiin karo
Shirkad Isbaanish ah (TSK) oo ka dambeysa baarkinka qoraxda ee ugu weyn Aasiya
Dubai waxay leedahay qalab cusub oo qorraxda lagu rakibay oo lamadegaanka ku yaal. Beerta waxaa lagu magacaabaa Mohammed Bin Rashid, oo ay dhistay shirkadda TSK waana tan ugu weyn Bariga Dhexe.